ညီနေမင်းprinter service program
တောင်းထားတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အရင်က T13 အတွက် တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ . အခု Epson S20, Epson T10, Epson T11, Epson T20, Epson T26, Epson T30 and Epson TX600FW အတွက် resetter program ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ဝဘ်ဆိုက်ကို မြန်မာပြည်ကနေ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ် . ဘာအမှားလုပ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ဘာမကြေနပ်လို့ ပိတ်လိုက်တယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါဘူး . စာရေးရတာတောင် အားမပါတော့သလိုပဲ . ၀န်ထမ်းကပဲ လက်စွမ်းပြလိုက်သလား ၊ အမြင်ကတ်ပြီးတော့ပဲ ပိတ်လိုက်သလားတော့ မသိပါဘူး . ကဲကဲ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it | mediafire | zshare | ziddu | megaupload
ညီနေမင်းCompaq Drivers, Laptop Driver များ
Compaq Presario V3000 Windows7and xp Drivers
nayzin11@gmail.com : အကို compaq presario V3000 VGA Dirver လေးလည်း လိုချင်ပါတယ် windows7ပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ကိုညီနေမင်း ဆက်လက် အောင်မြင်ပါစေ......လို့ ညီလေးရေ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် . အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .window xp အတွက် လိုချင်ရင်တော့ ဒီကို သွားပြီးတော့ Download လုပ်လိုက်ပါနော် .HIPSET:NVIDIA nForce 650i Chipset DriverDownloador use your original chipset drivers: DownloadAUDIOConexant High-Definition SmartAudio 221 DriverDownloadMODEM:HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCPDownloadGRAPHIC:NVIDIA GeForce Go 6150 Graphics DriverNVIDIA GeForce 7150M Graphics DriverDownloadYou can also try your windows Vista drivers: DownloadETHERNET/LANMarvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller Driver(applicable for win vxp/vista/7 32-bit and 64-bit)DownloadWIRELESS:Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7DownloadIntel PRO/Wireless Drivers for Microsoft 7DownloadHP WWAN Broadband Wireless Drivers(originally vista drivers)DownloadSupport Software for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology (Microsoft Windows 7)DownloadHP Wireless AssistantDownload Cyberlink YouCam SoftwareDownloadHP hs2300 HSDPA Firmware Update (Vodafone/Cingular)(originally vista drivers)DownloadLightscribe System SoftwareDownloadALPS Touchpad Pointing Device DriverDownloadHP DVB-T TV Tuner External Expresscard Driver(originally vista drivers)DownloadHP Digital/Analog TV Tuner Driver Software(originally vista drivers)DownloadHP Quicklaunch ButtonDownload (direct)Download (HP)CARD READER:Ricoh 5-in-1 Card Reader Host Controller and Driver for Microsoft Windows7(32-bit and 64-bit)Download orDownload
ကိုညီရေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ UPDATEMYDRIVERS smart tweak ရဲ့ ၂၀၁၀ key လေးကို ကျေးဇူးပြုလို့ တင်ပေးပါနော် ။ အဲဒီဟာလေးက ကွန်ပျူတာသုံးသူတွေအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်လို့ပါ ။ soft ware ရော key ရောတစ်ခါတည်းတင်ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမလားလို့ပါ။ ကိုညီ ဒီထက်မက ပိုပြီး အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေဗျာ။
ညီလေးရေ သူ့ရဲ့ version က 2010 ဆိုပြီးမလာပါဘူး . အခုကိုတင်ပေးလိုက်တာ နောက်ဆုံး version ပါပဲ . အထဲမှာ crack ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ညီ . window 7, xp. vista အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် . Download ifile.it | mediafire | zshare | ziddu
virus ကြောင့် disable ဖြစ်သွားသော Add/Remove Programs ဘယ်လို Enable ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်လဲ
Ko ညီနေမင်း ရေ လုပ်ပါအုံးဗျာ။ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Contro pane ထဲ က Add Or Remove Program ဖွင့် လို့ မရလို့ ပါ။ ကူညီပါအုံးဗျာ။(၁) Start > Run မှာ regedit လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ(၂) HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies အထိသွားပါ .(၃) Policies ကို နှိပ်လိုက်လို့ ပုံထဲက မြင်ရတဲ့အတိုင်း အတိုင်း NoAddRemovePrograms ဆိုတဲ့ ဖိုင်နာမည်နဲ့ ပေါ်နေရင် အဲ့ကောင်လေးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ .အသေးစိတ်တော့ မရေးပေးတော့ဘူးနော် ညီလေးနားလည်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် . နားမလည်ရင်ပြောပါ အစ်ကို အသေးစိတ် ပြန်ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ် .
အေးအကို ရေ ကျွန်တော် ကိုတတ်နိုင်ရင် iobit malware fighter v1.0 ရဲ့ activation key လေး ပေးပါလား အကို အမြဲ ကျေးဇူးတင်လျက်ဒါကတော့ chat box ထဲကနေ တောင်းဆိုထားတာပါ . spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, and hijackers စတဲ့ virus များရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် Win XP/2000/Vista/Win7အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် .. တင်ပေးလိုက်ပါပြီ .နောက်ဆုံး ထွက် version ပါပဲ . အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Thiha win : အကိုရေ Advanced System Care4ရဲ့ Serial ဖြစ်ဖြစ် Keygen ဖြစ်ဖြစ်ပေးပါဦး
ကွန်ပျူတာအတွက် မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များ ဖျက်ပစ်ခြင်း registry များထဲတွင် virus ကြောင့် မှားယွင်းနေသည်များကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ Hard Dive ထဲရှိဖိုင်များအား ပြန်စီပေးခြင်း။ system error များအား ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးခြင်း စသည့် စွမ်းဆောင် ချက်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။Features:• Designed for the latest Windows system environment. Gives your PC better speed and reliability • Powerful Hard Drive Defrag and Optimization • Next-generation Registry Deep Clean and Optimization • Automated Working in the Background • Defends PC Security with Extra Protection • Quick and Extensive Clean-up for Hard Drives • Keeps Your PC Running at Peak Performance • Fixes Multiple System Errors
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . တစ်ခုကြိုပြောထားပါ့မယ် ကီးကို မထည့်ခင် အင်တာနက်ကို ခဏ ဖြုတ်ထားပေးပါ . .
kaungnoeyaryar@gmail.com : အစ်ကို . ကျွန်တော် VCE မေးခွန်းတွေ လေ့ကျင့်ချင်လို့ အဲဒါ Visual CertExam Suite Manager Software ကိုFull Version ရှာရခက်နေလို့ပါ.Trial နဲ့ဖွင့်ရင်မေးခွန်း ၃ ၄ ခုပဲပွင့်တယ် ကျန်တဲ့မေးခွန်း၄၀၀ ၅၀၀ ကျော်လောက် ကမပွင့်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်က နယ်ကပါ ။ ရန်ကုန်က သင်တန်းမှာပြန်ကူးလို့ ရပေမဲ့ ခုက အဝေးရောက် လို့ပါ။ အစ်ကို့မှာရှိရင် ကူညီပါဗျာ။ကဲ ညီလေးရေ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် . ကီးထည့်နေရမှာ စိုးလို့ portable ပဲ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu
ညီနေမင်းDell Drivers, Laptop Driver များ
DELL INSPIRON 4030 Windows 7
htun htun : အစ်ကို ညီနေမင်း ကျနော့်ကို Dell Inspiron 4030 ရဲ့ video drivers Download Link လေးရှာပေးလို့ရမလား ခင်ဗျာ Window7အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်ကို အားမှ လုပ်ပေးပါ . တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါAudioChipsetTouchPadLanBluetoothWireless WLAN 1520Wireless WLAN 1501Vga AtiVga Intel
compaq presario cq 42 window7drivers
bhikkhuburma@gmail.com : ကိုညီရေ ဦးဇင်း စက်က ထိုင်းက၀ယ်လာတာ driver မပေးဘူး။ compaq presario cq 42 -ပါအမျိုးအစားက။ အခုတော့ driver မရှိလို့ အခက်တွေနေပါတယ်။ ကူညီပါဦးနော်။ဦးဇင်း တပည့်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ထိုင်းမှာက အဲ့လိုအကျင့်ရှိပါတယ် . ထိုင်းက၀ယ်တဲ့ စက်တိုင်း driver ကို မထည့်ပေးတတ်ပါဘူး. C ထဲမှာတော့ ထည့်ပေးထားတတ်ပါတယ် . Chipset Intel Chipset Download Audio Realtek High Definition Audio Download Graphics ATI Mobility Radeon HD 5430 Download Keyboard, Mouse and Input Devices Realtek USB 2.0 Card Reader Download Synaptics Touchpad Download Intel(R) Management Engine Interface Download HP Quick Launch Buttons Download Modem LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Driver Download Network Bluetooth Download Atheros Wireless LAN Driver Download Realtek PCIe FE Family Controller Download HP Wireless Assistant Download Software Turbo Boost Monitor Download
Compaq 420 Drivers For Windows7
winhtetsoe@gmail.com : ကိုညီနေမင်း မင်္ဂလာပါ. ကျွန်တော် Compaq 420 ရဲ့ Windows732bit and 64bit Drivers လိုခြင်လို့ ကူညီပေးပါခင်ဗျာ.......ကိုကိုထက်ရေ ကျွန်တော် အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အဆင် ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ.Chipset Intel Chipset Download Audio IDT High-Definition (HD) Audio Driver Download Graphics Intel Video Driver and Control Panel Download Keyboard, Mouse and Input Devices HP Universal Camera Driver Download Synaptics Touchpad Download HP Hotkey Support Download Modem LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Driver Download Network Bluetooth Download Broadcom Wireless LAN Drivers Download Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n Wireless LAN Download Atheros Wireless LAN Driver Download Realtek Ethernet Controller Drivers Download HP Wireless Assistant Download BIOS HP Notebook System BIOS ( F.00 ) Download Software HP Webcam Software Download HP Wallpaper Download System Default Settings Download
Compaq 420 For XP drivers
winhtetsoe@gmail.com : ကိုညီနေမင်း မင်္ဂလာပါ. ကျွန်တော် Compaq 420 ရဲ့ Windows732bit and 64bit Drivers လိုခြင်လို့ ကူညီပေးပါခင်ဗျာ.......ကိုကိုထက်ရေ ကျွန်တော် အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ. Chipset Intel Chipset Download Audio IDT High-Definition (HD) Audio Driver Download Graphics Intel Video Driver and Control Panel Download Keyboard, Mouse and Input Devices HP Universal Camera Driver Download Synaptics Touchpad Download HP Hotkey Support Download Modem LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Driver Download Network Bluetooth Download Broadcom Wireless LAN Drivers Download Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n Wireless LAN Download Atheros Wireless LAN Driver Download Realtek Ethernet Controller Drivers Download HP Wireless Assistant Download Storage Intel Matrix Storage Manager Driver Download Software HP Webcam Software Download HP Wallpaper Download System Default Settings Download
ညီနေမင်းAcer Drivers, Laptop Driver များ
Driver Acer Aspire 4741Z Notebook for Windows XP-Vista-7
kyawthu win : အစ်ကို. ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ စက်က......Acer Aspire 4741z ပါ။ အဲအတွက် Window7Driver and Window XP driver လေးလိုချင်လို့ပါ။ အစ်ကို.. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်.. .ရှာပေးပါအုံးနော်...ကဲ ညီလေးရေ အစ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီနော် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Download Driver Acer Aspire 4741Z Notebook for Windows XP-Vista-7 Description Driver Download Intel Chipset Driver v9.1.1.1025 Chipset Download Ericsson 3G Module Driver v6.1.18.8 3G Download QUALCOMM 3G Module Driver v1.1.00 3G Download Intel SATA AHCI Driver v9.5.6.1001 SATA AHCI Download Intel iAMT Driver v6.0.0.1179 iAMT Download Realtek Audio Driver v6.0.1.6037 Audio Download Atheros Bluetooth Driver v7.00.001.0 Bluetooth Download Broadcom Bluetooth Driver v6.3.0.3800 Bluetooth Download Alcor Card Reader Driver v1.0.12.50 Card Reader Download Broadcom LAN Driver v12.4.0.3 LAN Download Liteon Modem Driver v2.2.99.0 Modem Download ALPS Touchpad Driver v7.105.2015.1107 Touchpad Download Synaptics Touchpad Driver v14.0.6.0 Touchpad Download Intel Turbo Boost Driver v1.0.1.1002 Turbo Boost Download Intel Video Graphics Accelerator Driver v8.15.10.2057 VGA Download NVIDIA Video Graphics Accelerator Driver v8.16.11.8886 VGA Download Atheros Wireless LAN Driver v9.0.0.125 Wifi Download Broadcom Wireless LAN Driver v5.60.48.35 Wifi Download Intel Wireless LAN Driver v13.0.0.107 Wifi Download Acer 3G Application v2.00.3004 3G Download Chicony WebCam Application v1.1.158.203 WebCam Download liteon WebCam Application v1.0.1.6 WebCam Download Suyin WebCam Application v5.2.11.2 WebCam Download Acer ePower Management Application v5.00.3005 Power Download Dritek LaunchManager Application v4.0.5 LaunchManager Download Acer Turbo Boost Application v1.0.186.6Turbo Boost Download Intel Turbo Boost Application v1.0.186.6 Turbo Boost Download Warning: Beware of updating or flashing bios as your notebook will not boot up if any mistake occurs during flashing process Optional Driver Acer Aspire 4741Z Notebook Manufacturer and Description Driver Download Acer Supports NVIDIA GeForce GT 415M (N11P-GV Fermi) & NVIDIA GeForce GT 420M (N11P-GE Fermi) Graphics. v1.21 BIOS Download Acer Updates NVIDIA GeForce GT 420M (N11P-GE Fermi) VBIOS v1.19 BIOS Download Acer Updates VBIOS to support NVIDIA FERMI v1.18 BIOS Download Acer Fixes display only show on NB when restart with HDMI attached v1.11 BIOS Download Acer Supports Intel i5 450 CPU v1.12 BIOS Download Tutorial of Updating Bios on Acer
Resetter / Adjustment Epson Stylus TX100-TX101-TX105-TX110-TX111
Khin Myoးကိုညီနေမင်း Epson Styllus TX111 ရဲ Reseter Program လေး တင်ပေးစေချင် ပါတယ် internet မှာ ရှာလို့ မတတ်လို့ ပါ။ကဲ တစ်ခြားသူတွေလဲ ရှာလို့ရအောင်လို့ ကျွန်တော် printer4လုံးစလုံး တင်ပေးလိုက်တယ် . အားလုံးလဲ ကြေနပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .TX110-TX111 Resetter >> ifile.it | mediafire | zshare | zidduTX100-TX105 Resetter >> ifile.it | mediafire | zshareTX100-TX101 Resetter >> ifile.it | mediafire | zshare | zidduTX100 Resetter >> ifile.it | mediafire | zshare | ziddu
RESET CANON IX4000,IX5000 (service manual)
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Canon iX4000 A3 injet printer က Error 6502 တက်နေလို့ပါအစ်ကို။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ ကူညီပေးပါခင်ဗျာ။ Software resetter လည်း မရှာတက်လို့ပါဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းနည်းကူညီပါအုံး။service manual ebook လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . software ကတော့ နောက်မှပဲ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် . အဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦး . ဒီဆိုက် လေးကိုလဲ သွားကြည့်ပေးပါ Download mediafire | ziddu | zshare
အရင်က တင်ပေးထားတဲ့ Link က သေသွားပြီဆိုလို့ အသစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .
ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . window server 2003 ကို စိတ်ဝင်စားသူများ လေ့လာလို့ရပါတယ် . စာရေးဆရာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဦးဇော်လင်း ရေးသားထားတာပါ . မူရင်း scanner ဖတ်တဲ့သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိပေမယ့် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ဗျာ . ကျွန်တော့်ကတော့ ထိုင်းမှာ ရောက်နေတာနဲ့ scanner ဖတ်ဖို့ အချိန်လု ရတာနဲ့ကို မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး . နောက်ပိုင်းတော့ လုပ်ပေးပါဦးမယ် .. လုပ်ပေးချင်ပါတယ် . ပေးစရာ တွေလဲ အများကြီး ရှိပါတယ် . Mediafire | zshare Read More
avira antivirus update ဘယ်မှာ ဆွဲလဲ
မေး Mr com: အစ်ကို ကျွန်တော် အကူအညီလေးတောင်းချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် avira antivirus update ကို ဘယ်နေရာ ကနေယူရမလဲ ။ပြီးရင် ဘယ်လို တင်မလဲ ပြောပေးပါဦး။ ကျွန်တော် သုံး တာ free ပါ။ညီလေးရေ ဒီကို သွားပြီးတော့ update file ကို ယူလိုက်ပါ . June 24, 2011 ရက်နေ့ အထိရပါတယ် . အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
hp compaq nc6400 window xp drivers
မေး တယောဖြူးကိုညီနေမင်းရေ ကျွန်တော် hp compaq nc6400 ရဲ. onboard graphic driver လေး လိုချင်ပါတယ်.. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဒီမေးလ်ထဲပြန်ပို.ပေးပါခင်ဗျာအောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ .Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio DownloadADI SoundMAX High-Definition (HD) Audio Driver for Microsoft Windows XP DownloadADI SoundMAX HD Audio Driver DownloadIntel chipset installation utility (ICH7) DownloadIntel Matrix Storage Manager DownloadIntel 945GM Video Driver for Microsoft Windows 2000/XP DownloadATI Video Driver and Control Panel for Microsoft Windows XP Download ATI Video Driver and Control Panel DownloadNetwork ethernet-lan Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - PCI Express DownloadSoftware Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Download Texas Instruments Media Card Driver DownloadHigh-Speed Secure Digital (SD) Card Driver DownloadAuthentec Fingerprint Driver DownloadSynaptics Touchpad Driver DownloadHP Quick Launch Buttons DownloadHP Bluetooth PC Card Mouse Driver DownloadHDA Modem Installer DownloadHigh-Definition Audio Modem Driver Installer DownloadIntel PRO wirelss Driver: DownloadBroadcom Wireless LAN Driver DownloadHP Wireless Assistant: DownloadHP ev2200 1xEV-DO Broadband Wireless Module Software and Drivers : DownloadHP WWAN Broadband Wireless Drivers DownloadHP WWAN Broadband Wireless Client Managers - Vodafone DownloadHP WWAN Broadband Wireless Client Manager - Verizon Download
အသုံးချ video editing တည်းဖြတ်နည်းပညာ
video editing စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများလဲ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါပဲ . ကြိုက်ကြ လိမ့်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ကြပါ .Download ifile.it | mediafire | zshare | ziddu
ညီလေး တစ်ယောက် ပို့ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေချည်း ဖြစ်တာကြောင့် မဖတ်မဖြစ် ဖတ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် . သန်းထိုက် (ရွှေရိပ်)ရေးသားထားတာပါ . အသေးစိတ် မဟုတ်ပေမယ့် သိသင့်တာတွေ ချည်းပဲ ချပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . နယ်ဝေးက ညီအစ်ကိုများနှင့် နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ညီအစ်ကိုများ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it | mediafire | zshare | ziddu
မေး နိုင်သန်းးHello Ko Nyi Nay Min If possible, please help me. I would like to read how to use matlab software myanmar version.ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . စာအုပ် နှစ်အုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . နှစ်အုပ်စလုံး မြန်မာလို ရေးထားတာပါ .Using MatLAB and Simulink ဦးအောင်မြင့် (မြန်မာလို)Download ifile.it | mediafire | zshare | zidduMatlab 2006 (Getting started) (မြန်မာလို)Download ifile.it | mediafire | zshare
delete လုပ်ထားပြီးသော memory cards များမှ data များ format ချထားပြီးသော memory card မှ data များကို ပြန်ပြီးတော့ recovery ယူလို့ ရပါတယ် . တောင်းထားတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .Download ifile.it | Mediafire | ziddu | zshare
ကျွန်တော် နောက်ဆိုရင် http://adf.ly/ ဆိုက်ကနေ link တွေကို ချိတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် . ဘယ်လိုမျိုး Download ချရမလဲဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ် . link တစ်ခုရလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ့ webpage ရဲ့ ညာဖက်အပေါ်မှာ ပုံထဲကပြထားတဲ့အတိုင်း SKIP AD ဆိုတဲ့ အ၀ါရောင်စာသား လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ Download လုပ်ရမယ့် ဆိုက်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . (ပုံကြီးချင်လျှင် ကလစ်နှိပ်ပါ)
မေး မင်းလွင်မိုးးကိုညီနေမင်းရေ . ကျွန်တော်ကို cafesuite 3.58.1 ရဲ့ serial ဖြစ်ဖြစ် crack ဖြစ်ဖြစ် ရှာပေးပါလားခင်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရှာနေတာ တော်တော်လေးကို မူးနေလို့ ..ကိုမင်းလွင်မိုးရေ version 3.58 တော့ မတွေ့လို့ တွေ့တဲ့ 3.49L version ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် crack လဲ အထဲမှာ ပါထားပြီးသားပါ .CafeStation Operating System Windows 95/98/Me,2000/XP/2003/Vista/Windows7(32-bit and 64-bit) Processor Anything that can run Windows Memory Anything that can run Windows Disk Space 100 MB Client software Operating System Windows 95/98/Me,2000/XP/2003/Vista/Windows7(32-bit and 64-bit)Processor Anything that can run Windows Memory Anything that can run Windows Disk Space 20 MB Download >> ifile.it | Mediafire | zshare | ziddu
အထဲမှာ keygen ကော patch ကော နှစ်မျိုးစလုံး ထည့်ထားပေးပါ့တယ် . internet download manager ကတော့ အင်တာနက် သုံးတဲ့သူတိုင်း သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . latest version ပါပဲ . အဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Download ifile.it | Download mediafire | Download ziddu | Download zshare
virus ကြောင့် disable ဖြစ်သွားသော Add/Remove Prog...
Driver Acer Aspire 4741Z Notebook for Windows XP-V...
Resetter / Adjustment Epson Stylus TX100-TX101-TX1...